दैव पनि कस्तो! मामाघर आएकि सिमरनकाे हजुरआमा सँगै पहिरोले लियो ज्यान! – PathivaraOnline
Home > समाचार > दैव पनि कस्तो! मामाघर आएकि सिमरनकाे हजुरआमा सँगै पहिरोले लियो ज्यान!
म्याग्दी, २८ जेठ ।
म्याग्दीको रघुगंगा गाउपालिका–६ कोटगाउँमा पहिरोमा पुरिएर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । गएराति भिरबाट घरभित्र छिरेको बाढीले स्थानीय ५० वर्षीया हमाया शेरपुञ्जा र उनकी नातिनी ४ वर्षीया सिम्रन छन्त्यालको पहिरोले परिएर मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष मनकुमार शेरपुञ्जाले बताउनुभयो । एक्कासी बाढी पसेपछि दुईजनाको घटनास्थलमै मृत्यु थियो । पहिरोको जानकारी लगत्तै उद्धारमा खटिएका थिए ।
ढुङ्गामाटोले बनेको जस्ताको छानो भएको कच्ची गोठमा सुतिरहेको अवस्थामा एक्कासी पहिरो आएको थियो । घटनास्थलमा दलप्रसाद शेरपुञ्जा सहित भाग्ने क्रममा दुईजनालाई लेदो सहित आएको पहिरोले पुरेको बताइएको छ । पाखापानी प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरिक्षक ढकबहादुर हमालको नेतृत्वमा गएका प्रहरी सहित स्थानीयले उद्धारमा खटिएको प्रहरी निरिक्षक ध्रुवप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
भीरबाट माथिल्लो भागबाट लेदो पसेपछि गोठ भत्किएपछि मानवीय क्षतीसँगै अन्नपात, भाडाबर्तन लगायत सबै नष्ट भएको छ भने पशु चौपायको भने क्षति भएको छैन् । घटनास्थलमा अनुसन्धानका लागि बुधबार बिहान प्रहरी निरिक्षक धु्रबप्रसाद शर्माको नेतृत्वको टोली घटनास्थल गएको छ । मृतकको परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
पहिरोले पुरिएर ढुङ्गा, माटोले बनेको जस्ताको छानोको गोठमा रहेको अन्नपात, भाँडावर्तनलगायत सबै नष्ट भएको छ । पशुचौपायको भने क्षति भएको छैन । थप उद्धार र अनुसन्धानका लागि आज बिहान प्रहरी निरीक्षक शर्माको नेतृत्वको टोली घटनास्थल गएको छ ।
लकडाउन जेठभर लम्बन सक्ने, सवारी पास लिन के गर्ने? हेर्नुस्